နိုင်ငံရပ်ခြား အနောက်တိုင်း၊ ဥရောပအစားအစာ | Danuphyu Daw Saw Yee (London) | Page 2
Category နိုင်ငံရပ်ခြား အနောက်တိုင်း၊ ဥရောပအစားအစာ
ခရစ်စမတ်ပူတင်းဆိုတဲ့အတိုင်း ဒါလေးက ခရစ်စမတ်ညစာမှာ မပါမဖြစ်ပါရမဲ့ ရိုးရာအစားတခုပါ။ plum pudding လို့လဲခေါ်ပါတယ် ။ ခရစ်စမတ်ပူတင်းဟာ dried pulm ကိုအခြေခံတာမို့ပါကိုပါရပါမယ်။ ခပ်နွေးနွေးစားရပါတယ်။ ဘရန်ဒီလောင်းပြီး မီးပြပြီး စားရင်နွေးနွေးလေး နဲ့အနံ့ပိုသင်းပါတယ်။ ဒီလို ဒီဇင်ဘာ ခရစ်စမတ်လ အမှတ်တရအဖြစ် ပရိတ်သတ်ကို တင်ပြပေးပါရစေ။
– Dried mixed fruit (date,pear, plump, raisin)၃၀၀ ဂရမ်
-shredded suet ၁၀၀ ဂရမ်
-self-raising flour ၅၀ ဂရမ်
-white breadcrumbs ၁၁၀ ဂရမ်
-soft dark brown sugar ၂၂၅ ဂရမ်
-almonds (စိတ်ပိုင်းပြီးသား)၂၅ ဂရမ်
-လိမ္မော်သီးအခွံ ခြစ်ထားပြီးသား ၃ဇွန်းခန့် (စားပွဲတင်)
-ဘရန်ဒီ (သို့) အကြမ်းပန်းကန်လုံး ၁လုံးခွဲစာ
ကြက်ဥ၂လုံးကို ခေါက်ထားပါ။ ကြက်ဥကလွဲပြီး ကျန်တာများကို ရောမွှေပါ။ ဒယ်တလုံးထဲကို အကုန်ထဲ့ပြီး အပူပေးပြီးမွှေပေးပါ။
သကြားများအရည်ပျော်ပြီးစီးလာပြီဆိုရင် ကြက်ဥခေါက်ထားတာများထဲ့မွှေပါ။ ၃မိနစ်ခန့်ဆက်မွှေ ပြီးရင် ရပါပြီ၊
ပန်းကန်လုံးတလုံးကိုထောပတ်သုတ်ပြီး အစာများသိပ်ထဲ့လိုက်ပါ။ Foil နဲ့ခပ်တင်းတင်းလေးပတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အိုးထဲရေထဲ့ကာ အဲဒီအိုးထဲကို ပူတင်းခွက်လေးထဲ့ပြီး တနာရီခန့်ပေါင်းပေးရင်ရပါပြီ။
ပန်းကန်ပြားထဲကို ပန်းကန်လုံးပေါ်မောက်ပြီး ထဲ့လိုက်ပါ။ စားခါနီးရင် ပူတင်းကို ဘရန်ဒီ အနဲငယ်လောင်းပြီ မီးခြစ်လိုက်ပါ။ မီးတောက်ပြီးတဲ့အခါအနံ့မွှေးပြီး ပူနွေးနွေး ခရစ်စမတ်ပူတင်းလေးရပါပြီ။
ဒီနည်းလေးကို လန်ဒန်မြို့ရဲ့ Fortnum & Mason လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုင်မှာ ၁၇၃၈ မှာစပြီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်တဲ့၊ ရိုးရာအစာအဖြစ် ခရစ်စမတ်ပွဲများ၊ ပွဲတော်ရက်များတွင်လုပ်စားလေ့ရှိပါတယ်။ သူရဲ့ သဘောကတော့ ကြက်ဥကိုပြုတ်ပြီး အသားကပ်ကြော်လိုက်တာပါပဲ။ ကြော်တဲ့နေရာမှာ အထဲကကြက်ဥအနှစ်လေး မကျက်တကျက်စားချင်ရင် အသား ရွေးခြယ်ရာမှာ ကြက်သား၊ ဝက်သား ထက်အမဲသားကပိုစိတ်ချရပါတယ်။ သူက အကြာကြီးကြော်ရန်မလို လို့ပါ။ အကယ်၍များအသားမကျက်ပဲစားရင်တောင် အမဲသားကကျန်းမာရေးအတွက် မထိခိုက်ပါဘူး။ ကြက်သား၊ ဝက်သား များကတော့အပူရှိန်မြင့်မြင့်နဲ့ ကျက်အောင်ကြာကြာထားပေးရလို့ အထဲကကြက်ဥနှစ်လေးအကျက်လွန်သွားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ အမဲသားမစားရင် ဝက်အူချောင်း၊ ကြက်အူချောင်း အဖြူလေးများကိုကြိတ်ပြီးအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ အဖြူဆိုတာ တရုတ်ဝက်အူချောင်းအချိုအနီလေးနဲ့မှား မှာစိုးလို့ပါနော်။
-အမဲသားဓားနုတ်ပေါက် ၁၀၀ ဂရမ်
– self raising flour ၁ဇွန်း(စားပွဲတင်)
– bread crumbs ၄ဇွန်း(စားပွဲတင်)
-garlic powder ၁ဇွန်း(အချိုဇွန်း) (သို့ )ကြက်သွန်ဖြူထောင်းပြီးသား
အမဲသားဓားနုတ်ပေါက်ကို ငရုတ်ကောင်း၊ ဂျင်း ၊ garlic powder၊ ဆား တို့ဖြင့် တော်တော်စီးအောင်နယ်ထားပါ။
ကြက်ဥ ၁လုံးကိုဖောက်ပြီး ပန်းကန်တခုတွင်ခေါက်ထားပါ။
ကြက်ဥ၄လုံးကိုရေပွက်ချိန်ကစထဲ့ ၆မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီး ရေအေးခဏစိမ်ကာ ခွါထားပါ။ အဲဒါဆိုအထဲက အထဲကအနှစ် မကျက်ပဲအပြင် အကာမာမာလေး ရပါမယ်နော်။
self raising flour ကိုပန်းကန်ထဲ ထဲ့ပြီး ပြုတ်ပြီးသားကြက်ဥလေးများကိုခပ်ဖွဖွလှိမ့်ပါ။ ကြက်ဥပေါ်ကအစိုဓာတ်ခြောက်သွားစေရန် နဲ့ အသားအုပ်တဲ့အခါ ကြက်ဥပေါ်ကပ်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ထားသော အမဲသားကို လက်ပေါ်တင်ပြားကာ ကြက်ဥလေးကို ပုံပါအတိုင်း တင်ပြီးအသားများကို ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲအုပ်ပါ။
ပြီးရင် အသားအုပ်ပြီးသားအလုံးလေးများကို ကြက်ဥအရည်တွင်လှိမ့်ပြီး Bread crumbs နဲ့ကပ်ပါ။
ပြီးရင် ဆီပူပူတွင် မြုတ်အောင်၁၀မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီး ဆယ်လိုက်ပါ။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာSauce ၊ လတ်ဆတ်သောအရွက်စုံ Salads တို့ဖြင့်အရသာရှိရှိစားသုံးနိုင်ပါပြီ။
လန်ဒန်မှာလဘနွန်ဆိုင်လေးများနေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အမှတ်တမဲ့နဲ့တခါမှ လဘနွန်ဆိုင်မှာမစားဖူးပါ။ တရက်သော တနင်္ဂနွေနေ့ ကသူငယ်ချင်းစုံတွဲက အိသက်သားကြီးကားမျိုးစုံကိုအလွန်ရူးသွပ်မှန်းသိ၍ ကားပြပွဲသွားကြရန် အဖော်စပ်လာပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ကားမျိုးစုံ ကြည့်ရှူအပြီး နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ ပြပွဲအတွင်းစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ Sandwich လို အရာတွေသာရောင်းတဲ့ အတွက်အပြင်ကို ထွက်ပြီး စားသောက်ဆိုင် ရှာကြပါတယ်။ အဲဒီမှာသူငယ်ချင်းက လဘနွန်အစားအစာ စားကြည့်ရန်တိုက်တွန်းပါတယ်။ အသစ်အဆန်း စားကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်အခံရယ် သူက အကောင်းကြိုက်သူတယောက်ဆိုတာကို ယုံကြည်တာရယ်ကြောင့် စားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစားခဲ့ရတာတွေထဲမှာ လဘနွန်ခရမ်းသီးအနှစ် ကိုအိသက်အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အရသာဟာစိမ့်ပြီး စားလို့အလွန်ကောင်းပါတယ်။ လီမွန်ရည်ရဲ့အနံ့အရသာဟာလဲ အအီပြေပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ သံလွင်ဆီပါတဲ့ အတွက် အနံ့အရသာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာတော့ သံလွင်ဆီကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အတွက် ပေါင်မုန့်နဲ့ ဒီအတိုင်း ကိုတို့စားတာတွေ့ရပါတယ်. ပူနွေးသောNann Bread လို့ခေါ်တဲ့နံပြားပေါင်မုန့်နဲ့စားပါတယ်။ သူတို့က သလဲသီး အစိလေးများပါဖြူးစားပါတယ်။ အိသက်က သလဲသီးမပါပဲစားပါတယ်၊ ကြိုက်နှစ်သက်သူများတွဲစားနိုင်ပါတယ်နော်။ အဲဒီနည်းလေးကို ရှာဖွေကာပြန်လည် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
-နှမ်းအနှစ် Tahina ၃ဇွန်း( စားပွဲတင်)
-သံလွင်ဆီ ၂ဇွန်း( စားပွဲတင်)
ပထမဆုံး နှမ်းအနှစ် Tahina ကို အလွယ်ဝယ်မရရင် နှမ်းအဖြူ ယောက်ချိုဇွန်း၂ဇွန်းကိုရေ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်းခန့်ရောပြီး စက်ဖြင့် ကြိတ်ထားကာ ရလာသော နှမ်းဆီရော အနှစ်ရောကို ပုလင်းထဲ သိမ်းထားတာကိုဆိုလိုပါတယ်။
အဲဒါရပြီဆိုရင် ခရမ်းသီးများနူးအိနေအောင် မီးဖုတ်ထားပါ။ အခွံခွါပြီး အနှစ်များကို ဇလုံတခုထဲ ထဲ့ပြီး သံလွင်ဆီမှလွဲ၍ ကျန်တာအားလုံးထဲ့ပြီး မွှေစက်ဖြင့်သော၎င်း ထောင်း၍သော၎င်း ကြေအောင်ပြူလုပ်ပါ။
ပြီးမှသံလွင်ဆီအပေါ်က ဖြူးကာ ပူနွေးသော Nann Bread နံပြားဖြင့် တို့၍စားပါ။ အချဉ်ဖောက်ထားသော ငရုတ်သီးတောင့်များ သံလွင်သီးလေး များဖြင့် တွဲဖက် စားသုံးပါက အလွန်လိုက်ဖက်ညီပါတယ်။အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်အနဲငယ် ထပ်ဖြူးကာ စားပါ။
ဒီ ဟင်းလေးက Slow Cooker နဲ့ချက်လို့အကောင်းဆုံး ဟင်းလေးပါ။ သူက မော်ရကိုနိုင်ငံရဲ့ ဟင်းလျာတမျိုးပါ။ မြေအိုးလေးထဲမှာဖြေးဖြေးချင်းနှပ်ပြီးပေါင်းထားရတဲ့ဟင်းလေးပါ။ အကယ်၍မြေအိုးအဆင်မပြေရင် slow cooker, pressure cooker နဲ့ပေါင်းလို့ရပါတယ်နော်၊ Pilau Rice လို့ခေါ်တဲ့ ရနံ့မွှေး ထမင်းအဝါတမျိုးနဲ့တွဲစားကြပါတယ်။ အသားလေးများနူးအိပြီး မွှေးလဲအလွန်မွှေးပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အိသက်တို့အိမ်မှာ ဒီဟင်းလေးကိုချက်စားဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မများအကြိုက်တွေ့မဲ့ဟင်းလေးတမျိုးမို့တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ( ၂ယောက်စာ)
-အမဲသား ၅၀၀ ဂရမ်( ၄၀ကျပ်သားခန့်)
-ကြက်သွန်နီ ၁လုံး၊ ကြက်သွန့်ဖြူ ၃ မွှာ
အမဲသားများကို သန့်စင်ကာ ဂျင်း၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၁ဇွန်းဖြင့်နာနာဆုပ်နယ်ထားပါ။
ပထမဆုံး ချက်မဲ့မြေအိုးထဲကို သံလွင်ဆီထဲ့အပူပေးပါ။
ဆီပူရင် ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူများထဲ့ပါ။ ကြက်သွန်နွမ်းမှ ခရမ်းချဉ်သီးထဲ့ပါ။
ပြီးမှအမဲသားကို ထဲ့ကာ သစ်ဂျပိုးမှုန့်၁ဇွန်း၊ ဂုံဂမန်မှုန့်၁ဇွန်း၊ ဆားနဲနဲ၊ ကြက်သားမှုန့်၁ဇွန်း၊ ဆနွမ်းမှုန့်၁ဇွန်း၊ အရောင်တင်၂ဇွန်း ထဲ့ကာ ၁၀မိနစ်ခန့်လုံးပါ။
ပြီးမှ အမဲသားနူးသည်အထိ ရေထဲ့ကာအဖုံးအုပ်တည်ပေးပါ။ အမဲသားနူးအိကာနီးရင် အာလူး၊ နံနံပင်အုပ်၊ သံလွင်သီးလေးများထဲ့ကာ ခဏနေ၁၅ မိနစ်အကြာ ပူပူနွေးနွေးရနံ့သင်း အမဲသားTagine ဟင်းလေးကိုစားလို့ရပါပြီ။
လန်ဒန်မြို့ကအလွန်ကို လူမျိုးစုံရှိတတ်ပါတယ်။ အစားအသောက်လဲမျိုးစုံရနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကျောင်းအားရက် ၁ပတ်မှာ အနည်းဆုံး တခါတော့အပြင်ထွက်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ အိသက်တို့ မိသားစုကအစားအသောက်ဆို အသစ်အဆန်းရော မသစ်မဆန်းရော အကုန် စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ အလျောက် အဲလိုအပြင်သွားတိုင်း အပြင်မှာစားဖြစ်တဲ့အခါ စားတဲ့ဆိုင်ရဲ့ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးဟင်းတွေ စားစရာတွေကို မှတ်သားပြီးပြန်ချက်ပြုတ်ကြည့်တတ်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ အိသက်ကချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ်တွေဆို အကုန်ကြိုက်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဆိုင်မှာစားစား အစပ်လေးမှ မပါရင် ခံတွင်းတွေ့လှတယ်လို့မထင်တတ်ပါ၊ စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တောင် အကြိုက်ဆုံးစာရင်းထဲမဝင်ချင်ဘူးပေါ့။ ဒီကြက်အသဲဟင်းလေးက အိသက် လန်ဒန်စရောက်ခါစ ကျောင်းသားဘဝ 2005 မှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Nando’s ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးက အရသာအတိုင်းချက်ထားတာပါ။ အရမ်းကြိုက်လို့ပါ။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီဆိုင်မှာ အလုပ် လုပ်တုန်းကရီစရာလေးပါ။ အိသက်အမျိုးသားက(ရည်းစားဘဝ) လဲ အဲဒီမှာ အချိန်ပိုင်း အလုပ် လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမီးရည်းစားဆိုတာ အဲဒီက ဗမာ Staff တွေကလွဲလို့ဘယ်သူမှ မသိကြပါဘူး။ သူတို့ကရည်းစားဆိုအလုပ်အတူပေး မလုပ်ပါ။ အဲဒီတော့ သူကအကိုပေါ့လေ။ အဲဒီမှာအလုပ်အတူ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၂ယောက်က ကိုယ့်ကို ကြိုက်ကြလေတော့ ကိုထက်ကို နှမပေးယောက်ဖကြီးများ ဖြစ်လာမလားရယ်လို့ သူလုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေ ရှေ့က ကူကူလုပ်ပေးကြပါတယ်။ သူကလဲ အရှုံးထဲကအမြတ်ဆိုပြီး နာနာလေးဖိခိုင်းပလိုက်ပါတယ်တဲ့။ အိမ်အပြန် Bus ပေါ်ရောက်မှ ၂ ယောက်သား လက်ကလေးကိုင်ပြီး ရီရတဲ့အဖြစ်လေးတွေပါ။ ခုအဲဒီ ကြက်အသဲဟင်းလေးချက်ပါမယ်။
-ကြက်အသဲ ၅၀၀ ဂရမ်( ၃၀ ကျပ်သား)
-သံလွင်ဆီ ၂ဇွန်းခွဲ (ဟင်းချက်ဇွန်း)
– Malt Vinegar၂ဇွန်း (စားပွဲတင်)
-ငရုတ်သီးအချဉ်ဖောက်ပြီးသား ၃တောင့် ( ရိုးရိုးလဲသုံးလို့ရပါတယ်)
-ဆနွမ်း ဇွန်းဝက်( အချိုဇွန်း)
-ဆားနဲနဲ ၊ ကြက်သားမှုန့်၁ဇွန်း( စားပွဲတင်)
ညက်အောင်ထောင်းထားပြီးသား ကြက်သွန်များကိုအရောင်တင်မှုန့်၂ဇွန်း၊ ဆနွမ်းဇွန်းဝက် တို့ရောပြီးသံလွင်ဆီဖြင့် ရွှေဝါရောင်သန်းသည်အထိအပူပေးပါ။ ပြီး မှ ငရုတ်သီးမှုန့်များထဲ့ပါ။
ငရုတ်သီးလဲကျက်ပြီဆိုရင်သန့်စင်ပြီးသားကြက်အသဲများကိုထဲ့လုံးပါ။ တချိန်တည်းမှာပဲ Malt Vinegar ၊ ဆားနဲနဲ ၊ ကြက်သားမှုန့်တို့ထဲ့ပါ။
အသဲလေးများအရောင်ပြောင်းပြီဆိုရင် ရေအနဲငယ်ထဲ့ပြီးအုပ်ထားပါ။ ဆီပြန်ပြီဆိုရင် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Nann Bread ၊ သံလွင်သီးလေးများဖြင့်တွဲဖက်စားနိုင်သလို မြန်မာပီပီ ထမင်းပူပူဖြင့်တွဲစားချင်ရင်လဲ ဟင်းကောင်းတခွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ငါးလိပ်ကျောက်ကို ဘယ်လိုစားလဲမေးထားတဲ့ညီမတယောက်အတွက်ဒီနည်းလေးကို Blog မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့အဲဒီငါးက နှစ်ပေါင်း၃၀အထိ အသက်ရှင်ပါတယ်တဲ့ ၊၂ပေ အထိရှည်ပါတယ်. များသောအားဖြင့် ဖမ်းမိတဲ့ငါးတွေကသက်တမ်း ၇နှစ်လောက်ပဲရှိလို့ ၁ပေလောက်ပဲရှိတတ်ပါတယ်။ ရေငန်မှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူက မချက်တတ်ရင်နဲနဲလေးတော့ညှီပါတယ်။ သူ့ရဲ့အရသာကကျန်ငါးများနဲ့မတူ အရသာထူးပါတယ်။ အသားကချက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ကြော်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ခြောက်မသွားပဲ အစိုဓာတ်လေးရှိတဲ့အတွက် ပိုချိုပြီးစားလို့ကောင်းပါတယ်။ ကင်ပြီး၎င်း ကြော်ပြီး၎င်း ပေါင်းပြီး၎င်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ မြန်လဲမြန်စားလို့လဲအလွန်ကောင်းပါတယ်။
-ငါးလိပ်ကျောက် ၁၅ဂရမ် (၁၀သား)
-ပေါင်မုန့်ခြောက်အမှုန့်လေးများ( bread crumbs)
-ပဲတောင့်ရှည် ၆ဂရမ် (လက်၁ဆုပ်စာ)
-ဇီယာကြီးရွက်ခြောက်( dried oregano)
ပထမဆုံး ငါးလိပ်ကျောက်လေးကိုအရေခွံလွှာလိုက်ပါ။ သန့်စင်ပြီးရင် ဂျင်းနဲ့နယ်ထားပေးပါ။
ပေါင်မုန့်ခြောက်လေးများကို ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဇီယာကြီးရွက်ခြောက်မှုန့်၊ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၁ဇွန်း တို့ဖြင့်ရောကာ ဂျင်းနယ်ထားသော ငါးအသားပြားကိုကပ်ပါ။
ပြီးမှဆီပူပူတွင် နှစ်ကာကြော်လိုက်ပါ။ ကြော်ပြီးစစ်စစ်ထားပါ။
ပြီးရင်ဒယ်တွင် ဆီပါလေကာထဲ့ကာ ကြက်သွန်ဖြူထဲ့ပါ။ ပျားရည်ထဲ့ပါ။ ပဲတောင့်ထဲ့ပြီးလှိမ့်ကာ oregano ,ဆားနဲနဲ၊ ကြက်သားမှုန့်၁ဇွန်း တို့ထဲ့ပါ။ ရေအစားပဲတောင့်နူးရန် နွားနို့ထဲ့ ပြီး ၁မိနစ်အကြာ ပန်းကန်ပေါ်ခင်းလိုက်ပါ။အဒီအပေါ်ကမှ ကြော်ထားပြီးသားငါးပြားလေးကိုတင်လိုက်ပါ။အသီးအနှံစုံSalad လေးနဲ့တွဲစားလျင်အလွန်လိုက်ဖတ်ပါတယ်။